‘यो’नी किन चिलाउछ’ ? ‘उपचार कसरी गर्ने’ ? महिला डाक्टर…..(भिडियोसहित) – Sidha Post 24
प्रायः जसो महिलामा यो’नी चि”लाउने समस्या हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा अझै पनि यो’नी चिलाउने समस्यालाई सहजै बाहिर ल्याएको पाइँदैन । यौ-नी चिलाउने कारण र यसको समाधान कसरी गर्ने ?”
समाजमा अझै पनि यो’नांगमा देखा पर्ने समस्यालाई सहजै बाहिर ल्याइँदैन । यौ-नां-गमा देखिएका सम’स्या भन्दा उत्ता’उ”लो लगायतका उपनाम दिई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रथा अझै पनि काय मै छ । जसको परिणाम स्वरुप यो-नां’गमा देखिएका समस्याले अन्य अंगमा पनि असर गर्ने अवस्था आउँछ । यौ’नां’गमा देखिने समस्यामध्ये यो’नी चि’लाउने समस्याले धेरैलाई पी’डा दिएको छ ।”
यो-नी चिलाउने प्रमुख कारण : स्टो’जन हर्मो’नको कमी । यो’नी फोहोर राख्नु । धेरै व्यक्तिसँग यौ’नस’म्पर्क राख्नु । विशेष गरेर महि’नावारीको समयमा प्रयोग गरिने प्या’ड तथा कपडा लामो समय राखिराख्नु , यो-नी सफा नगर्नु । नुहाँउदा यो”नीलाई असर पुर्याउने सावुन वा सेम्पो प्रयोग गर्नु । यो”नी प्राय जसो पहिलो पटक म’हिनावारी हुने उमेरका किशोरी तथा महिनावारी सुकेका महिलालाई बढी चिलाउँछ । यसको मूख्य कारण भनेकै स्ट्रोजन हर्मोनको कमी हुनु हो ।”
बच्ने उपाय : यो’नी सधै सफा राख्ने । भित्र लगाउने कपडा प्रत्येक दिन परिवर्तन गर्ने । र’जस्व’ला हुँदा ३/३ घण्टामा प्या’ड वा कपडा परिवर्तन गर्ने । नुहाउँदा यो-नांगमा मात्र प्रयोग गर्ने स्याम्पो प्रयोग गर्ने । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यो’नांगमा आवश्यक पर्ने केही किटाणु हुन्छन् । यो-नी यसरी लामो समयसम्म चिला-इरहे उपचार तत्काल गराउनु पर्छ ।भिडियो हेर्नुस् ।”
३० बर्षिय आन्टिको प्यास मेटाउने कोहि भएन !
जाडो म’हिनामा बढि शा’रीरिक स’म्पर्क गर्न मन लाग्छ के गर्ने होला